Amathikithi esitimela ashibhile e-CFL Nezintengo Zokuhamba | Londoloza Isitimela
Amathikithi esitimela ashibhile e-CFL Nezintengo Zokuhamba
Ikhaya > Amathikithi esitimela ashibhile e-CFL Nezintengo Zokuhamba
Lapha ungathola lonke ulwazi mayelana Amathikithi esitimela ashibhile e-CFL futhi Izintengo zokuhamba ze-CFL kanye nezinzuzo.
Izihloko: 1. I-CFL nge-Train Highlights
2. Mayelana neCFL 3. Imininingwane Ephezulu Yokuthola Ithikithi Leshibhile Lesitimela seCFL
4. Abiza malini amathikithi e-CFL 5. Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukusebenzisa izitimela zeCFL, futhi ungahambi ngendiza
6. Uyini umehluko phakathi kwesikhathi esifushane, Namathikithi Osuku ku-CFL 7. Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-CFL
8. Ngifuna ukufika ngaphambi kwesikhathi esingakanani ngaphambi kokusuka kweCFL 9. Yini amashejuli wesitimela seCFL
10. Yiziphi iziteshi ezinikezwa yi-CFL 11. I-CFL FAQ
I-CFL nge-Train Highlights
Ngezinga eliphakeme lokufika kwesikhathi le 96%, I-CFL (Inkampani esemthethweni yesitimela yaseLuxembourg) ungomunye wabasebenza ngokuthembekile kojantshi baseYurophu.
Minyaka yonke, I-CFL iyathatha 25 izigidi zabantu futhi 105 amathani ayizigidi ezimpahla ngaphesheya kwezindawo eziya kuzo eLuxembourg naseYurophu yonke.
I-CFL iyayithanda imvelo, I-CO2-mahhala, futhi 100% wabo bonke ugesi wabo utholakala kumandla avuselelekayo.
I-CFL ingumhlinzeki wezinsizakalo zokuhamba kakhulu waseLuxembourg.
I-CFL, INational Society of Luxembourg Railways, elinye igama le-Luxembourg National Railways. Kusukela yasungulwa ku 1946, I-CFL inikeze ngezinsizakalo zokuhamba ezakhamuzini zaseLuxembourg.
Ukunikezwa kwe-CFL izinsizakalo zesitimela ngaphakathi kweLuxembourg nakulo lonke elaseYurophu. Ngethikithi elifanele, ungavakashela konke okuhle kakhulu izindawo zamaholide eYurophu. Ngezigaba ezahlukahlukene zamathikithi, I-CFL ibhekelela izidingo zawo wonke umuntu.
Izitimela zeCFL ezivamile zemizila yesitimela yilezi, E-Luxembourg – EBrussels, E-Luxembourg – Paris, I-Ettelbruck – Liege, UWasserbillig- Dusseldorf. Ungafika emazweni angomakhelwane ngaphakathi kweYurophu usebenzisa izitimela zeCFL: France, Germany, futhi Belgium.
Ngaphesheya kwenhlangano, 3,090 abasebenzi basebenza kujantshi ukuqinisekisa ukuthi ezinye izigidi zabagibeli zifika ngokuphepha lapho ziya khona nsuku zonke.
Iya ku Gcina Ikhasi eliyisiqalo noma usebenzise lewijethi ukusesha uqeqesha amathikithi e-CFL:
Imininingwane Ephezulu Yokuthola Ithikithi Leshibhile Lesitimela seCFL
inombolo 1: Bhuka amathikithi akho e-CFL kusengaphambili ngangokunokwenzeka
Intengo ye Amathikithi esitimela e-CFL likhuphuka njengoba usuku lokuhamba lusondela. Ungonga imali ngokubhuka amathikithi wakho wesitimela we-CFL kude ngangokunokwenzeka kusukela ngosuku lokuhamba (Ngokuvamile 3 izinyanga ezizayo yisilinganiso esiphezulu). Ukubhuka kusenesikhathi kuqinisekisa ukuthi uthola amathikithi esitimela ashibhe kunawo wonke we-CFL. Zilinganiselwe ngenani, ngakho-ke ngokushesha uyala, okushibhile kuwe. Ukuze songe imali kumathikithi esitimela e-CFL, thenga amathikithi akho kusenesikhathi.
inombolo 2: Ukuhamba nge-CFL ngezikhathi ezingekho ngaphezulu
Njengakuwo wonke opharetha wesitimela, Amathikithi esitimela e-CFL eshibhile ngesikhathi se-off-peak times, ekuqaleni kwesonto, futhi emini. Ungaqiniseka ukuthola athenge amathikithi esitimela ngemali eshibhile phakathi nesonto. Ngolwesibili, NgoLwesithathu, nangoLwesine, Amathikithi esitimela e-CFL angonga kakhulu. Ngenxa yevolumu ye- ngezamabhizinisi uya emsebenzini ekuseni nakusihlwa, amathikithi esitimela abiza kakhulu ezikhathini eziningi. Kushibhile kakhulu ukuhamba nganoma yisiphi isikhathi phakathi kokusa nokusa kusihlwa. Impelaviki kungenye yezikhathi eziphakeme zezitimela, ikakhulukazi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. Izintengo zamathikithi esitimela e-CFL nazo ziyenyuka ku amaholide omphakathi namaholide esikole, namaholide ezikole eYurophu angahlala isikhathi eside 3 amasonto isikhathi ngasinye.
inombolo 3: Oda amathikithi akho e-CFL lapho uqinisekile ngohlelo lwakho lokuhamba
Izitimela ze-CFL zifunwa kakhulu, nangomncintiswano omncane, njengamanje zihlala ziyizinketho eziphezulu zezitimela eLuxembourg. Bayakwazi ukusetha imikhawulo yamathikithi esitimela njengaleyo enqabela ukushintshaniswa kwamathikithi noma ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuthi kunguhlobo lwebhizinisi lwethikithi lesitimela. Yize kusenamawebhusayithi lapho ungathengisela abantu amathikithi akho amasekeni, ICFL ayikuvumeli ukuthengiswa kwamathikithi angamasekeni. Lokhu kukusiza kanjani ukonga imali? Oda ithikithi lakho uma uqinisekile ukuthi ishejuli yakho izokulondolozela ukubhuka ithikithi elilodwa kabili ngoba kukhona okuvelile futhi awukwazi ukusebenzisa ithikithi lokuqala olithengile.
inombolo 4: Thenga amathikithi akho e-CFL ku-Save A Train
Gcina isitimela kukhulu kunakho konke, okuncono, namadili ashibhile kakhulu amathikithi wesitimela eYurophu. Ubudlelwano bethu obuhle nabashayeli bezitimela abaningi, okuyimithombo yamathikithi esitimela, nolwazi lwethu lwama-algorithms ezobuchwepheshe ahilelekile, sinikeze ukufinyelela kwamadili ashibhe kunawo wonke wamathikithi esitimela. Asinikezi amadili wamathikithi esitimela ashibhile e-CFL kuphela; sinikeza okufanayo nakwezinye izindlela ze-CFL.
Amanani entengo yaseLuxembourg kuya kuColmar
Amanani entengo yaseLuxembourg aya eBrussels
I-Antwerp kuya eLuxembourg Izintengo Zesitimela
Metz ukuze Luxembourg Izitimela Izintengo
Abiza malini amathikithi e-CFL?
Izinto zokuhamba zomphakathi ngaphakathi kwe- IGrand Douchy yaseLuxembourg kwesinye isikhathi imahhala kanti kwesinye isikhathi ayinayo, kuya ngomzila futhi uma uyisakhamuzi. Nokho, 1st ezitimeleni ze-CFL, njalo kubiza imali, kepha futhi akuyona inketho ebizayo. Amathikithi esitimela e-CFL aqala kusuka ku- € 3 kuya ku- € 6 ngohambo olulodwa lwesitimela. I Intengo yethikithi lesitimela seCFL kuya ngokuthi hlobo luni lwethikithi olithengayo nokuthi ukhetha ukuhamba nini:
Isikhathi Esifushane € 3
Ithikithi Losuku € 6
Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukusebenzisa izitimela zeCFL, futhi ungahambi ngendiza
1) Ufika njalo eCity Centre. Lokhu kungenye yezitimela zeCFL uma ziqhathaniswa nezindiza. Izitimela ze-CFL nakho konke okunye ukuhamba ngesitimela kusuka noma yikuphi edolobheni kuya enkabeni yedolobha elilandelayo. Kuyakongela isikhathi kanye nezindleko ze-cab kusuka esikhumulweni sezindiza ukuya enkabeni yedolobha. Ngezitimela, Kulula ukufika kunoma yiliphi idolobha oqonde kulo. Akukhathalekile ukuthi usukaphi, EBrussels, Nancy, Paris, noma i-Amsterdam, Izikhungo zamadolobha ziyinzuzo enkulu yezitimela zeCFL! Ngokwesibonelo, Isikhumulo Sezindiza saseLuxembourg sinjalo 20 imizuzu ukusuka enkabeni yedolobha.
2) Ukuhamba ngezindiza kudinga ukuthi ube esikhumulweni sezindiza okungenani 2 amahora ngaphambi kwesikhathi sakho sendiza. Kuzofanela ukuthi uhlole amasheke wokuphepha ngaphambi kokuvunyelwa ukugibela indiza. Ngezitimela ze-CFL, kufanele ube esiteshini ngaphansi kuka 30 imizuzu kusengaphambili. Lapho futhi ubheka isikhathi okuthatha ngaso ukusuka esikhumulweni sezindiza uye enkabeni yedolobha, uzobona ukuthi izitimela ze-CFL zingcono imigomo yesikhathi sokuhamba esiphelele.
3) Amathikithi esitimela e-CFL ashibhile noma ngabe uwaqhathanisa namathikithi endiza. Ngaphezu kwalokho, lapho uqhathanisa wonke amacala abandakanyekile, Amathikithi esitimela e-CFL anenani lentengo elingcono kakhulu. Ngezinye izindleko ezinjengezindleko zemithwalo okungafanele uzikhokhele ezitimeleni, ukuhamba nge-CFL uhamba phambili.
4) Izitimela zinobungane bemvelo. Ngokuqhathanisa phakathi kwezitimela nezindiza, izitimela zazihlale ziphuma phambili. Izindiza ziyangcolisa kakhulu umkhathi ngamazinga aphezulu ekhabhoni awanikezayo. Izitimela ngokuqhathanisa ziyakhipha Ikhabhoni engu-20x ngaphansi kunezindiza.
Uyini umehluko phakathi kwesikhathi esifushane, kanye Nethikithi Losuku ku-CFL?
I-CFL inezinhlobo ezahlukene zamathikithi ezabelomali ezahlukene nobude bohambo: noma ngabe ibhizinisi noma ezokungcebeleka. Ungaqiniseka ukuthi elinye lalamathikithi lingahle lihle ohambweni lwakho lwekilasi lokuqala ngaphesheya kweLuxembourg ezitimeleni zikazwelonke zeCFL.
Amathikithi Esikhathi Esifushane we-CFL:
Ithikithi lesikhathi esifushane lisebenza ekilasini lokuqala kuphela 2 amahora kusuka ngesikhathi sokuqinisekiswa. Ungahamba kunethiwekhi yesitimela ye-CFL ngaphandle kwemikhawulo kepha ucabangele isikhathi sokufika kwesitimela lapho siya khona, ngokwesikhathi. Uma kufanele uhambe ngesaziso esifushane, kufanele uthole leli thikithi. Awukhawulelwe esitimeleni esithile, futhi uvunyelwe ukukhetha ukuxhumana kwakho.
I-CFL Amathikithi Osuku:
Amathikithi e-CFL Day isikhathi eside amathikithi ekilasi lokuqala, futhi zisebenza kusukela ngesikhathi sokukhishwa kuze kube 4 ngakusasa. Ungathenga ithikithi lesitimela le-CFL Day kumshini wethikithi, ihhovisi lamathikithi, noma Gcina Isitimela.
Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-CFL?
Izinto zokuhamba zomphakathi, kufaka phakathi izinsizakalo zezitimela ze-CFL ezikhethiwe, ngaphakathi kweLuxembourg, mahhala. Ngakho-ke, asikho isidingo sokubhaliselwe kwe-CFL, ngaphandle kokuthi ukhetha ukuhamba ngebanga le-1. Izakhamizi zaseLuxembourg ezivame ukuwela umngcele ziye eFrance, Ungajabulela ukudlula njalo ngenyanga nge-Flexway 1st class, ngoba 85 €. Ngaphezu kwalokho, Izakhamizi zaseLuxembourg zingajabulela amanani aphansi kumathikithi wanyanga zonke aya eJalimane. Ngakho-ke lapho ungathola khona imininingwane eyengeziwe ngalokhu?
– Izibali zamathikithi e-CFL.
– Ocingweni lwamakhasimende lwe-CFL 2489 2489
Ngifuna ukufika ngaphambi kwesikhathi esingakanani ngaphambi kokusuka kweCFL?
Kunzima ukusho ngokunembile kwesibili, kepha Gcina iSitimela kweluleka ukuthi ufike cishe 30 imizuzu ngaphambi kwesikhathi sakho sokuhamba. Ngalesi sikhathi esinqunyiwe, uzoba nesikhathi esanele sokuthenga izinto ozidingayo yenza uhambo lwakho lwesitimela njengoba kulula ngangokunokwenzeka.
Yini amashejuli wesitimela seCFL?
Ungathola ngesikhathi sangempela ekhasini lethu lasekhaya ku-Gcina isitimela. Mane uthayiphe indawo yakho yamanje nendawo oyifunayo, futhi sizokukhombisa imininingwane.
I-Luxembourg kuya eCologne Izintengo Zesitimela
I-Luxembourg kuya Koblenz Izintengo Zokuqeqesha
Amanani entengo eParis aya eLuxembourg
IBrussels iye eLuxembourg Izintengo Zezitimela
Yiziphi iziteshi ezinikezwa yi-CFL?
Isiteshi saseLuxembourg seCFL sisePeace de la Gare esisenkabeni yedolobha.
ETroisvierges, Izitimela ze-CFL suka futhi ufike usuka esiteshini seTroisvierges esisemugqeni 10, ukuxhuma idolobha laseLuxembourg enyakatho yezwe. ITroisvierges iyikhaya lamagquma amabili aphakeme kakhulu eLuxembourg.
Izitimela zeCFL nazo ziyahamba zifike edolobheni laseNancy eFrance. Izitimela ze-CFL zisuka esiteshini saseLuxembourg Central ziya eNancy njalo 1 ihora.
Ungathola iFlanders eBelgium ngesitimela ukusuka eLuxembourg kuya eGhent kanye / noma eBrussels. Izitimela ze-CFL zisuka njalo ngehora zisuka eLuxembourg ziya emadolobheni amangalisayo eBelgium futhi amadolobha amadala amahle aseYurophu.
Ingabe Amabhayithi Avumelekile Ebhodini Izitimela ze-CFL?
Amabhayisikili avunyelwe ezitimeleni ze-CFL mahhala, futhi inqobo nje uma ugcina ezindaweni ezikhethiwe zamabhayisikili. Ungathola amabhayisikili agcina izikhala ngokumaka okuluhlaza eminyango ye-CFL.
Ngabe Izingane Zihamba Khulula Ezitimeleni zeCFL?
Yebo, kodwa kuze kube seminyakeni yobudala ye- 12 iminyaka. Izingane ezingaphansi kuka 12 iminyaka, angahamba mahhala uma ephelezelwa ngumuntu omdala kuneminyaka yobudala 12, onethikithi elifanele nekhadi lokuzazisa.
Ingabe Izilwane Ezifuywayo Zivunyelwe Ezitimeleni zeCFL?
Yebo, I-CFL ithanda izinja zabo bonke osayizi nalaba 4 Abantu abanemilenze bangahamba mahhala ezitimeleni ze-CFL. Izinja kumele zihole futhi azivunyelwe ukuhlala ezihlalweni.
Yiziphi izinqubo zokugibela zeCFL?
Wonke umgibeli kufanele wethule ithikithi elivumelekile nekhadi lokuzazisa. Uma ulahlekelwe ithikithi lakho lesitimela noma ubushesha, futhi angathenganga ithikithi kusengaphambili, ungakwenza lokho esitimeleni, kusuka kubamele i-CFL.
Imibuzo evame ukubuzwa ye-CFL – Ngabe kufanele ngi-oda isihlalo kusengaphambili ku-CFL?
Ayikho, akukho ukubhuka kwesihlalo ezitimeleni ze-CFL zikazwelonke noma zomhlaba, uhlala lapho unendawo yamahhala, futhi uzohlala unendawo yamahhala uma uthenge ithikithi lesitimela ngaphambi kwesikhathi.
Ingabe ikhona i-inthanethi ye-Wi-Fi ezitimeleni ze-CFL?
Ayikho. Ungajabulela I-inthanethi yamahhala ye-Wi-Fi eziteshini zezitimela ze-CFL ezikhethiwe, kodwa i-Wi-Fi ayitholakali ezitimeleni ze-CFL.
ILuxembourg iya e-Ettelbruck Amanani Esitimela
Amanani entengo e-Ettelbruck aya eJunglinster
IMersch iya eLuxembourg Izintengo Zesitimela
Clervaux kuya eLuxembourg Izintengo Zezitimela
Uma ufundile kuze kube manje, uyazi konke odinga ukukwazi ngezitimela ze-CFL futhi ukulungele ukuthenga ithikithi lakho lesitimela le-CFL ngohambo lwakho oluzayo Londoloza Isitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka leli khasi esizeni lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-cfl%2F%0A%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi), Noma ungaxhumeka ngqo kuleli khasi.